घरमाश्रीमती हुँदाहुँदै गर्लफ्रेन्ड बनाएर डुल्ने को ? …म पनि भर्जिन पुरुष खोजौँ त ? - BBC Taja khabar
बिहिबार २३ कार्तिक, २०७४	comments
तर यस्तो सस्तो कुरामा बिचार अल्झाउनु छैन मलाई । प्रेम, यौन, विवाह जस्ता प्रकृतिक र सांस्कृतिक पक्षहरुबारे अलि फराकिलो दायरा बनाएर हेर्नुपर्छ । पक्कै पनि समाज बदलिँदैछ । यस्ता विषयमा हेरिने दृष्टिकोण फेरिएको अवस्य छ । यद्यपी कुण्ठाले भरिएका ‘सेक्सिस्ट’ पुरुषहरुको सोचले गर्दा पुरुषसत्तालाई थप मलजल पुर्याएको तितो यथार्थ अझै छ । साभार -सविता सापकोटा यो लेख हामीले HDनेपाल बाट लियका हौ